Raw 6-Paradol powder (27113-22-0) Vaiti - Phcoker
Paradol, inozivikanwawo seRaw 6-Paradol powder, ndiyo inoshandiswa inonaka yezvirimwa zveGuinea pepper (Aframomum melegueta .......
Unyanzvi: 1560kg / mwedzi
Raw 6-Paradol powder (27113-22-0) video
Raw 6-Paradol powder (27113-22-0) Specifications
Product Name Raw 6-Paradol powder
Kemikari Name Raw 6-Paradol powder; Paradol; 1- (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl) decan-3-one;
muchiso Name Kwete deta yekuwanikwa
Kirasi yeMishonga Ichi chinodhaka chinogona kuumbwa muDMSO
CAS Number 27113-22-0
Molecular Formula C17H26O3
Molecular Wsere 278.392 g / mol
Monoisotopic Mass 278.188 g / mol
Kunyorera Point 31 - 32 ° C
Biological Half-Life Kwete deta yekuwanikwa
ruvara White Solid powder
Skukodzera Yakasanganiswa muDMSO
Storage Temperature Dry, rima uye pa 0 - 4 C kwenguva pfupi (mazuva kusvika mavhiki) kana -20 C kwenguva refu (mwedzi kusvika kumakore).
Raw 6-Paradol powder APane Zvokudya zvinowedzera -> Flavoring Agents
Raw 6-Paradol powder (27113-22-0) Tsanangudzo
Paradol, inozivikanwawo se6-Paradol, ndiyo inoshandiswa inonaka yezviyo zveGuinea pepper (Aframomum melegueta kana mbeu dzeparadhiso). Inowanikwawo mune ginger. Paradol yakawanikwa iine antioxidant uye antitumor inosimudzira migumisiro mumutevedzeri wemushonga. Iyo inoshandiswa muvhenekeri semafuta anokosha kuti ape kuchena.
6-Paradol powder (27113-22-0) Mushonga Wekuita
Kutungamirirwa kweParolol (6-paradol) (10 mg / kg) inonyatsodzikisa nhamba yeIba1-positive cells 1 nemazuva 3 mushure mekuoma. Uyezve, Paradol inoshamisa inoderedza nhamba yeIba1-postive masero munharaunda dze periischemic kunyange mushure memazuva 3 anotevera M / R dambudziko. Paradol (6-paradol) inoratidza simba rinopesana nokuvhiringidza kwemazana emapuroni emapuroni mu lipopolysaccharide-yakasimudzirwa BV2 microglia yakabva muuropi hwemutsara, kusanganisira 2-, 4-, 6-, 8-, uye 10-paradol. Uyezve, Paradol inoratidza simba rakasimba pane dzose dzeparadol dzinozivikanwa. Paradol inoratidzawo nguva yakanyanya kufambidzana pane imwe nzvimbo ye antiobesity yezviito pane zvinoenderana nemigumisiro inoratidzirwa kubatwa kwemetabolites mune ino chidzidzo.
Paradol ( -paradol) inokurudzira apoptosis munyaya yemukati squamous carcinoma cell line, KB, nenzira inotenderera. Paradol inokurudzira apoptosis kuburikidza ne caspase-3-inotenderera nzira.
Benefits ye6-Paradol powder (27113-22-0)
▪ 6-Paradol uye antipyretic, yakagadzirirwa kuora musoro, kurwadziwa (musuru ache, bhakkache) uye fivhiri iri yoga kana inosanganiswa nemimwe mishonga.
▪ 6-Paradol inoshandiswawo nemamwe marwadzo ekurapa kurwadziwa kwepamusoro, osteoarthritis, kutonhora, uye mazino.
varumbidzwa 6-Paradol powder (27113-22-0) Dosage
Mutengo wevaruzhinji kuvanhu vakuru 325 kune 650 mg yose 4 kusvika maawa 6. Zuva guru remazuva zuva rinonzi 4 gramu.
Mwana- iyo chirongwa chinonzi recommended 10 kusvika 15 mg / kg yose 4 kusvika maawa 6.
Iyo inouya sehwendefa uye mvura inotora nemuromo, kana pasina kana kudya.
Zvikanganiso ye6-Paradol powder (27113-22-0)
6-Paradol haisi yeopiate, Paradol uye antipyretic, yakagadzirirwa misoro, kurwadziwa (misuli ache, bhakkache) uye fever. Kunze, zvingave nezvimwe mimwe migumisiro sezasi:
Urombo hwepamusoro hwepamusoro
Kuputika kweganda uye kupererwa kwepvo